Dyson 360 Eye, ilay robot vacuum cleaner izay hifehezanao amin'ny Android | Androidsis
Dyson dia iray amin'ireo marika fanaka malaza indrindra ao amin'ny indostria. Ary tsy fahita firy fa, na dia efa nanolotra mpanadio habaka robot nandritra ny taona maro aza ireo mpifaninana aminy, dia tsy nanolotra na inona na inona ilay mpanamboatra.
Saingy mazava ho azy, ny zava-drehetra amin'ity fiainana ity dia manana fanazavana: Dyson dia namolavola ny teknolojia tsara indrindra ho an'ny mpanadio banga robot. Dyson 360 Eye, biby manana endrika tena manintona ary afaka mifehy amin'ny findainao Android ianao.
Ampandehano ny Dyson 360 Eye amin'ny findainao Android
Ary i Dyson dia nanao ezaka be dia be ka ny Dyson 360 Eye robot vacuum cleaner dia mihoatra ny mpifaninana aminy. Ho an'izany nametraka vola 48 tapitrisa dolara ry zareo, 8 amin'izy ireo ao amin'ny laboratoara ao amin'ny Imperial College any Angletera, izay niandraikitra ny fampivelarana ny sensor teknolojia ho an'ity robot ity, izay manana fahitana ambony noho ireo mpifaninana aminy, ny algorithms fandikana ary ny fifanakalozan-kevitra.
Ahoana no ahafahanao manararaotra ny fampifanarahana an'ity robot ity amin'ny fitaovanao Android? Mampalahelo fa toa tsy ho vitanao ny mitondra an-tanana ny Dyson 360 Eye, tsy hanana safidy hampiditra balafomanga kilalao akory ianao hanala ny havana / reny / mpiray trano aminy, fa azonao atao izany. esory lavitra ny robot ka manomboka manadio ny trano alohan'ny hahatongavanao izy, afaka mampihetsika na miato ny fitaovana na aiza na aiza.
Ho fanampin'izay, ilay Dyson 360 eye robot vacuum cleaner dia biby miaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 805, 3 GB RAM, fitehirizana 16 GB… tsia, mpanadio banga izy ary izany dia: madio. Mazava ho azy, ny motera kely fanjifany miaraka amin'ny Teknolojia cyclone Dyson manolotra hery suction lehibe kokoa noho ny mpanadio banga hafa eny an-tsena.
Mikasika ny anarany, Dyson dia nitatitra fa ny robot vacuum cleaner mampiditra fakan-tsary 360 degre afaka misambotra sary 30 isan-tsegondra, mamela ny robot hitodika tsara kokoa noho ny mpifaninana aminy. Eny, manao toy izany koa ireo mpanadio banga maontina antonony, fa hino kosa izahay fa tsara kokoa ny sarin'ireo mpanadio banga noho ny mpifaninana aminy.
Mariho fa ny kilalao Dyson vaovao dia mampiasa rafitra mihetsika amin'ny fomba tanky ankoatry ny borosy malalaka. Momba ny rafitry ny hetsika izay mampifangaro ny Vovona robot Dyson Eye 360Raha ny fitsipika dia hamela anao hiampita velaran-tany samy hafa tsy misy olana ianao, handresy ny sakana toy ny tanky miaramila. Ary ny bara borosy malalaka, namboarina tamin'ny fibre karbaona, dia mampanantena ny hahatratra ireo zoro sarotra indrindra nefa tsy hampiasa borosy lafiny mahazatra an'ireo mpifaninana aminy.
Manohitra anao ny fetranao fizakantena, 20 minitra Toa kely dia kely amiko izany raha ampitahaintsika amin'ny fitaovana hafa mitovy aminy, izay mety maharitra adiny iray amin'ny fahafahany feno. Na dia miala tsiny amin'ny tenany aza i Dyson amin'ny filazany fa tsara kokoa ny mpanadio azy, noho izany dia mila fotoana fohy kokoa handosirana handao ny tranonao madio ianao.
Ny Dyson 360 Eye, izay nambara tamin'ny fanontana farany an'ny IFA, dia ho tonga any Japon amin'ny lohataona 2015 amin'ny vidiny 130.000 yen (eo ho eo 980 euros hanova) ary taty aoriana dia hahatratra ny tsena iraisam-pirenena, na dia tsy te hanome daty aza i Dyson.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Dyson 360 Eye, ilay robot vacuum cleaner azonao fehezina amin'ny findainao
Ny famadihana ny efijery amin'ny Android-nao dia manomboka androany hetsika tsy misy patanty